रिट निवेदकका वकिलहरु मुद्दा यसरी लगातार सर्नुलाई 'रहस्यमय' बताउँछन्। न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र भण्डारीले आफैं यो मुद्दा हेर्ने चासो नदेखाएका भए र यसलाई अर्को इजलासमा राखिएको भए यो साताभित्रै सर्वोच्चको निर्णय आइसक्ने उनीहरुको भनाइ छ।
सुरुमा भट्टराई बहसका लागि उभिए। माथि इजलासबाट न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले सोधे, 'कति जना वकिल हुनुहुन्छ?'
'आज त सकिँदैन श्रीमान्। समय व्यवस्थापन भयो भने हाम्रो सकौंला तर विपक्षी विद्वानहरु पनि हुनुहुन्छ,' भट्टराईले भने।
त्यसपछि न्यायाधीश भण्डारीले भने, 'आज बाँकी रहेको समय बहस सुनौं, अर्को बहस आइतबार गरे हुन्न?'
'आज जति हुन्छ गरौं, बाँकी हेर्दा हेर्दै भोलि गरे भैहाल्छ नि श्रीमान्,' रिट निवेदक पक्षका वकिलले भने।
'भोलिदेखि म विदामा छु। भोलि ११ बजे त मेरो फ्लाइट छ। उपचारका लागि विदेश जाँदै छु,' न्यायाधीश भण्डारीले भने, 'शनिबार फर्किने टिकट छ, त्यसैले आइतबारलाई राखौं।'
'आइतबार त निकै ढिलो हुन्छ श्रीमान्। यो मुद्दा धेरै सरिसक्यो। बरु आज बहसै सुरु नगरौं, भोलि अर्को इजलासमा पेसी तोकिएला,' भट्टराईले भने।
उनको कुरा सुनेपछि न्यायाधीश मिश्रले 'आज सबैको बहस सकिन्न' भनेर फेरि सोधे।
'इजलासले आदेशै गर्‍यो भने त हामीले नमान्ने कुरा हुँदैन, मान्छौं। तर यो मुद्दा धेरै लम्बिइसक्यो श्रीमान्, त्यसैले बरु आज बहस नगरौं,' रिट निवेदक पक्षका वकिलहरुले एकै स्वरमा भने, 'प्रधानन्यायाधीशले भोलि अर्कै इजलास तोक्नुहोला।'
'हैन आजै सुरु गरौं र आइतबार अर्को बहस गरौं,' न्यायाधीश भण्डारीले भने।
रिट पक्षका वकिलहरु भरतपुर मुद्दा यही इजलासले हेर्नुपर्छ भन्ने सर्वोच्च नेतृत्वको पनि मनसाय देखिने बताउँछन्। 'नभए मंगलबारदेखि विदामा बस्ने न्यायाधीशको इजलासमा यो मुद्दा पारिने थिएन,' बहसपछि एक वकिलले भने।
बहस क्रममा रिट निवेदक तर्फका वकिल भट्टराईले 'भरतपुर-१९ मा पुन: मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय मनासिब नभएको' तर्क गरे। त्यहाँ माओवादी प्रतिनिधिले मतपत्र मात्र च्यातेको तर मतगणनास्थल कब्जा नगरेको भन्दै पुन: मतदान हैन, पुन: मतगणना हुनुपर्ने उनको माग थियो। कब्जा भएको भएमात्र पुन मतदान गर्नुपर्ने उनको जिकीर हो।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन ३, २०७४, १२:३३:१२